James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius iyo inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Madder". Our James Maddison Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, mhuri yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pezita, kusimudzira mukurumbira nyaya, ukama uye hupenyu hwehupenyu.
Hongu, munhu wose anoziva kuti ndeye wepamusoro yeChirungu anorwisa vanhu vezera rake. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezvemaBiography aJames Maddison ayo anofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Upenyu Hwekutanga
James Daniel Maddison akazvarwa musi we 23rd waNovember 1996 kuna amai vake, Una Maddison nababa, Gary Maddison muCoventry, England. James akaberekwa semwana wekutanga nemwanakomana kune vabereki vake vaifadza, Una uye Gary vaifananidzirwa.
Kusiyana nekutenda kwakakurumbira, James Maddison ane dangwe rake kubva kuRepublic of Ireland kuburikidza nemumwe wekuru nanasekuru vake vari Irish.
Maddison akakurira nemukoma wake muduku uye pakutanga akanga ari mumhuri yepakati-kati. Izvi zvaiva pamberi pebhora yemari yakawedzera imba yake. Kare kumashure, iye aiva mhuri yeimba yakabatana yakave nevatungamiri vakawanda veMan United, kusanganisira James pachake. Pasi pane chikamu chevhidhiyo uchapupu hunoratidza Maddison akapfeka Manchester jersey paanenge achitamba sochena semukomana.
Iyo yakawira sei murudo neMutambo:
Imba yemhuri yaJames Maddison yaiva nemaminetsi maviri kubva kuAlan Higgs Center iyo imba yeKoventry City Football Academy.
Kuswedera pedyo kwepedyo iyi kwakava chikonzero chekuti Maddison awedzere kufarira kuva chigadzirwa chaasina kumboona sechinhu chinoshamisa.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Basa Rokutanga
Bhora pasina mubvunzo rakakonzera maddison wechidiki kure nemamwe masarudzo aasarudzo aaizoita semucheche. Akatanga nekuita vabereki vake kuti vanyorire sevadzidzi vekutanga-Chikoro vachiri kuRichel Lee Primary School.
Maddison's pre-academy makore akatsigira akaisa mukati maake nheyo yakanaka yebhobho iyo pakupedzisira inobhadhara pachena zvikamu zvayo. Akanga ari pakati pevamwe vaduku vemauto vakashanda manheru avo (mushure memaawa echikoro) vachitamba bhora, mutezo chete wavanoda. Pasi pane chikamu chevhidhiyo uchapupu hwedzidziso yekudzidzira yaVaMaddison inotanga kusvika muna March 2004.
Upenyu Hwokutanga paCoventry Academy:
Maddison aiva mumwe wemwana muduku kudarika akadzidza zvidzidzo zvakamunyoresa neCockry youth pazera re9. Iyi yakanga iri nguva vabereki vake vakanga vaine chikoro chechikoro chake. Maddison panguva ino akaenda kuCaludon Castle School.
Upenyu muyunivhesiti inofadza, asi Maddison aifanira kuita zvibayiro zvizhinji mangwanani. Akakurumidza kukwira nenzira yake kubva kumuduku muduku uye mupakati wepamusikana kusvika kumudzidzi anonyanya kukosha muchechi yake yechikoro. Kukura kwakadaro kwakauya semugumisiro webasa rakaoma iro rakaita kuti zvikwereti zviwane kubva pane zvaanenge achiita kuti atore mumakwikwi emakwikwi. Ona vhidhiyo uchapupu pasi apa;
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
James Maddison panguva yemakore ekutanga evechidiki akatanga kuratidza chimiro chechokwadi chemukati ari kurwisa uye mutambi wemutambo we team yake yeCoventry. Pasinei nokuva muduku, Maddison akava Ratidza-Mukomana uyo aizoununura pose paanenge aine basa rokuumba zvinangwa. Izvo zvakaguma kwaari zvakapa No: 10 jersey.
"Aiwa: 10 dhemiro yakandibatsira kuti ndive noukama hwangu nokuti pakati pepakati pepakati paigara nguva yakazara nevarume vakuru, vakasimba vaitamba midzi yokudzivirira sevadzivisi," anodaro Maddison.
Pasi pane vhidhiyo uchapupu hwekuti James Maddison anotanga kuumba chinangwa nekugadzirisa unyanzvi.
Kuva Gwaro Rekuunganidza:
James Maddison maererano ne TheGuardian kamwe akabvuma kutora zvinhu zve Philippe Coutinho's mutambo ari oga. Maddison aiwa No: 10 roles yakamuona kwete kungoita svondo yekukohwa uye kuunganidza zvikwata. Tsvaga pasi, chidimbu chevhidhiyo uchapupu.
James Maddison akapedza hutano hwake semumwe wevakuru uye vane nyanzvi mutsva muCoventry yake. Pamusana pekukwanisa kwake kukwegura uye kugadzira zvinangwa, akabhadharwa kutamba Cage Football tournaments apo akapfuura zvinotarisirwa sezvinowanzoitika.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Simuka Mukurumbira
Nyaya ye2013-2014 yakaona Maddison achibatanidzwa muCoventry yekutanga-team squad kwaakaramba achipenya.
MunaJanuary 2016, kunyange panguva yechitatu yebhokisi reChirungu (League One), Maddison akazununguswa zvikuru neChristian League clubs neLiverpool vachinyanya kuda kumutengesa. Zvisinei, akanzwa kuti nguva yakanga isiri yakakodzera kuti atambe mumutambo wepamusoro.
Maddison akasarudza kutamira kuNorwich saka aizoramba ari pedyo nemhuri yake. Mwedzi inotevera, kushanda kwechikwata chechikwata chake kwakamuona achibatanidzwa mune England pasi-21 squad muna March 2016.
Kutevedzera 2018 / 2019 inotanga yekutanga yeLeicester nechekudzoka shure kune League Premier goals, iye zvino muEngland manager Gareth Southgate akamanikidzwa kudana James Maddison pamwe chete neshamwari imwe yeChirungu Jadon Sancho ku boka guru munaOctober 2018. Izvi zvinoshamisa uye kuona Maddison kurota kwake kwekutamba nyika yake haisisiri fantasy inopfuura. Vamwe vose, sezvavanotaura nhoroondo.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukama Hupenyu
Izvo zvingave zvakavanzika zvekuvanzika zvaJakove Maddison ndezvimwe zvisingabviri kuongororwa kwevanhu vose nekuda kwerudo rwake rwehupenyu huri pachedu uye zvichida kutamba-pasina.
Chokwadi ndechekuti, James Maddison akasarudza kufunga nezvebasa rake uye akaedza kudzivisa chero ruvara rwehupenyu hwake. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kuti tive nechokwadi pamusoro pehupenyu hwake hworudo uye kufambidzana kwenhau.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva James Maddison hupenyu hwehupenyu hwako huchakubatsira kuti uwane mufananidzo wakazara wake.
Maddison munhu ane ruzivo uye ane simba uye ane pfungwa dzakasununguka uye anonakidzwa zvikuru. Kufarira kwake kwoupenyu uye kunyanya kukosha mhuri yake haina miganhu. Izvi zvinopupurirwa muhupenyu hwake hunofadza uye hunoseka kune vanhu vaanoda.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Upenyu hweMhuri
Maddison ane nhare yakasimba yekutsigira kubva kune imwe nguva yepakati-mapoka yemhuri yemhuri. Munhu wose akazvipira kuna iye kusanganisira baba vake vaanoda Gary Maddison sezvinoonekwa muvhidhiyo yehuduku hwake pasi apa.
Pasinei nerutsigiro, Jakobho anoziva pakupedzisira zviri pasi pake kuti aite uye aratidze zvaanogona kuita pamamiriro acho ezvinhu. Pasinei nekugadza baba-mwanakomana ukama nababa vake pamatare ebhora, Maddison anozivikanwa kuva pedyo zvikuru nemmai sezvaakaratidzwa kubva mumasangano ake ehurumende.
Vose amai vake nababa vane chido chekutarisa mhenyu, mwana wavo wose mutambo mumwaka wose uye haazofungi kufamba nechepasi munyika yevhiki nevhiki nevhiki kwekutarisa James kuita zvaanonyanya kuita mubasa rekutamba.
James Maddison Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts- Untold Facts
The Tattoo Facts:
James Maddison ane ruoko rwake rwakakwana nematotori ayo asina kungovhiringidzirwa mafashoni. Mifananidzo yose iri muruoko rwake rworuboshwe inokosha kwaari.
Maddison akatora tattoo kuti ataure chokwadi nezvemhuri yake iyo ine chikamu chakanyanya kuverenga; "Rudo rwemhuri ndicho chikomborero chikuru muupenyu. "
Uyewo, nguva iyo yakakosha yepamberi yake yepamhizha inoratidzwawo sechinyorwa paruoko rwake. Yaro zuva iro kurota kwake kwekuve muchengeti webasa rakazoitika.
James Maddison akambobatwa mumusana unosanganisira iye, shamwari dzake nevamwe boka revasingazivi. Akambozvirumbidza kune vanhu vasiri vake panguva imwe chete yePaul 7,000-a-week mubhadharo mushure mekunge shamwari yake ichiti yakarwisa mumwe wevarume nokuda kwekusaziva Maddison sechirumbira. Apo pavakabvunzwa kuti verengedze chiitiko chacho, mumwe wevakashungurudzwa akati;
"Akati akawana £ 7,000 pavhiki. Akati akati anowana zvakawanda mumwedzi kupfuura zvatinoita mugore. Haana kubvunza zvandakaita. Akati zvipfeko zvake zvaikosha kupfuura zvipfeko zvedu. "
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga James Maddison Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 21, 2020